दमौलीमा युआरएलको शाखा सञ्चालनमा – Sabaikoaawaj.com
दमौलीमा युआरएलको शाखा सञ्चालनमा
शनिबार, अशोज ७, २०७४ 8:31:32 PM	मा प्रकाशित
पोखरा ७ असोज,
पोखरा, प्रदेश नं. ४ को पहिलो रेफरेन्स ल्याबोरेटरी युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि(युआरएल)ले तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा शाखा सञ्चालन गरेको छ ।
युआरएलले व्यास नगरपालिकाको अनसनचौतारीमा १ वर्षअघि स्थापना गरेको कलेक्सन सेन्टरलाई स्तरोन्नति गरी शाखा सञ्चालन गरेको हो । युआरएल दमौली शाखाको शनिबार एक समारोहबीच व्यास नगरपालिकाका मेयर बैकुण्ठ न्यौपानले उद्घाटन गरे ।
मेयर न्यौपानेले आफूहरु स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार र जनताको स्वास्थ्यमा सहज पहुँचका लागि काम गर्न लागिरहेको बताए । उनले ७० हजार जनसंख्या रहेको व्यास नगरका बासिन्दालाई गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन युआरएलसँग सहकार्य गर्न तयार रहेकोसमेत उल्लेख गरे ।
मधुमेह, थाइराइड तथा हर्मन रोग विशेषज्ञ डा. तीर्थलाल उपाध्यायले बेलैमा स्वास्थ्य सजगता र उपचारले परिसानी कम गराउने, पीडा बेहोर्न नपर्ने र जीवनसमेत जोगाउने बताए । उनले मधुमेह र थाइराइड रोगबाट नेपालीहरु आक्रान्त हुँदै गएकाले खानपान, व्ययाम, उपचारमा ध्यान दिन र जीवनशैली सुधार गर्न आग्रह गरे ।
युआरएलका अध्यक्ष सुशील थापाले आफूहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकै उत्तरदायित्व वहन गरेर ल्याब स्थापना र शाखा सञ्चालन गरेको बताए । उनले भने, ‘नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन र सामाजिक उत्तरदायित्व निभाउन हामी लागिरहेका छौं ।’ थापाले सेवा जवाफदेही र समुदायले अपनत्व महसुस गर्ने गरी सञ्चालन गरिने आश्वासन दिए ।
युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले विश्वकै उत्कृष्ट प्रविधि र मेसिनमार्फत् यस क्षेत्रलाई ल्याबमा आत्मनिर्भर बनाउने दिशातर्फ युआरएल लागिरहेको बताए । उनले तनहुँका बासिन्दा, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था र शुभेच्छुकको साथ पाउने अपेक्षासमेत व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा लायन्स क्लब इन्टरनेसनल ३२५ बि १ का भाइस गभर्नर अशोककुमार श्रेष्ठ, रत्नहरि अस्पतालका अध्यक्ष ताराप्रसाद श्रेष्ठ, एमाले तनहुँ उपसचिव विष्णुभक्त सिग्देल लगायतले बोलेका थिए ।
शाखा उद्घाटनको अवसरमा युआरएलले रगतमा हुने खराब बोसो (टिजी) र मधुमेहसम्बन्धी रक्त परीक्षण निःशुल्क गरेको थियो । शिविरमा ३ सय ६८ जनाको निःशुल्क रक्त परीक्षण गरिएको छ । युआरएलका अध्यक्ष सुशील थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सञ्चालन सञ्चारकर्मी अनिषा श्रेष्ठले गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, अशोज ७, २०७४ 8:31:32 PM